Maoritania: Fisamborana ny mpiandraikitra ny Taqadoumy.com · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2019 12:07 GMT
Nosamborina tao Nouakchott tamin'ny 18 Jona 2009 i Hanevy Ould Dahah, 32 taona, mpanorina sady talen'ilay tranonkalam-baovao sangany ao Maoritania www.taqadoumy.com. Mpitandro filaminana tsy nampiseho taratasy milaza ny vesatra anenjehana azy no namatotra sy nitondra azy ho any amin'ny paositry ny polisy tao an-drenivohitra Maoritaniàna.
Samy nanameloka ilay fisamborana daholo ireo vondrom-piarahamonina samihafa, nahitàna fanambaràna avy amin'ny filohan'ny sendikan'ireo mpanao gazety nitaky ny hamotsorana azy avy hatrany sy niantso ny hanaovana fitorevahana ho fanehoana firaisankina amin'i Ould Dahah.
Raha mbola manjavozavo ny anton'ilay fisamborana: ny Taqadoumy (Ilay Liampivoarana) no tena tranonkala maoritaniàna mpampiaka-peo miampanga ny fitondra-miaramila sy ny governemanta voafidy teo aloha tao Maoritania.
Tamin'ny famoahana ireo tantaranà kolikoly, tsy fahaizana mitondra tena nitarika ho amin'ny hatezeran'ny kilasy politika tao amin'ny firenena, betsaka ireo fadifady narodan'ilay tranonkala avy amin'ny hery ankavia izay efa nahatratra ny faha-2 taonany.
Tamin'ny Martsa lasa teo, nosamborin'ireo manampahefana ilay mpanangom-baovao Abbass Ould Abraham ary nosivaniny nandritra ny fotoana voafetra ilay tranonkala. Ny sedra nahazo an'i Ould Abraham nandritra ny fotoana fohy dia teraka avy aminà tsanganan-dahatsoratra iray tena feno fanakianana navoakany, namotika ilay mpifehy ny tafika ao Maoritania Jeneraly Mohamed Ould Abdelaziz. “Vao mainka manome hery anay ny fanakatonana ny tranonkalanay” hoy ny fanehoankevitr'i Hanevy momba izay ampahan-tantara izay tamin'ny fotoan'androny.
Ny May lasa teo, nitatitra ny tranonkala Taqadomy hoe ilay lehilahy laharana faha-2 ao amin'ny fitondrana, ny loholona Mohcen Ould Elhaj, no nivazavaza teny mamoafady tamin'ny iray amin'ireo iraka mpiara-miasa aminy tao amin'ny hotely iray ao Nouakchott, nanoloana ireo mpanangom-baovao marobe tonga handrakotra lanonana avo lenta iray. Nandritra ny fipoahan'ny hatezerany, norahonany ihany koa ny tsy maintsy hamaliany faty an'ilay tranonkalam-baovao sy ireo tonian-dahatsoratra ao aminy .
Manambady ary niteraka zazalahy kely iray, fantadaza i Ould Dahah noho ilay tsanganan-dahatsorany malaza “Fiery Letters” (Taratasy Mivaivay) izay nanombohany talohan'ny nanaovany ny Taqadoumy.com, be mpamaky tokoa nohon'ny fampifangaroana ny fahaizany manakiana ireo governemanta nifandimby tao amin'ny firenena sy ny fiangaly ananany manokana rehefa manoratra.
Hatramin'ny 20 Jona 2009, tsy mbola nanaovan’ ireo manampahefana maoritaniàna fanambaràna ny momba ilay fisamborana, na dia tsy mbola misy aza vesatra fiampangàna natao an'ity raim-pianakavioana 32 taona ity.